Kedu ka m ga-esi kwụsị Ffprobe? - Njehie
Isi > Njehie > Ffprobe.exe system error - ka esi ekpebi
Ffprobe.exe system error - ka esi ekpebi
Kedu ka m ga-esi kwụsị Ffprobe?
Site Asmwsoft Pc Optimizer isi window họrọ 'Startup manager' tool. Site na mmalite njikwa isi window chọtaokere.exe usoro ị chọrọ ka ihichapụ ma ọ bụgbanyụọsite na ịpị ya wee pịa bọtịnụ nri aka nri wee họrọ 'Hichapụ ihe ahọrọ' ka ihichapụ ya kpamkpam ma ọ bụ họrọ 'Gbanyụọhọrọ ihe '.
Oge ụfọdụ na ndụ anyị na-arụ ọrụ, anyị na - eji sọftụwia n’ezie n’amaghị na anyị na - eji ụfọdụ sọftụwia - ezigbo ihe atụ nke a bụ FFMPEG! FFMPEG bụ n'ezie a iwu na ịba uru na ọrụ ya bụ iji tọghata faịlụ, na na usoro ya nwere ike ime a ọnụ ọgụgụ nke jụụ ihe dị ka mma. Ọfọn, n'ihi ikikere sitere na FFMPEG, a na-etinye ya na ụfọdụ sọftụwia ndị ọzọ iji rụọ ọrụ ya na ndabere ma n'ihi ya, ị nwere ike ịghọta na ọ bụ n'ezie ebe ahụ, mana ọ bụ n'ezie! Yabụ ihe anyị ga - eme taa abụghị naanị na anyị na - enye FFMPEG nnabata ya kwesịrị, anyị ga - amụta etu esi eji ya site na usoro iwu, nke ahụ bụ larịị, vanilla FFMPEG nke emere site na ala kọmputa na-agba ọsọ! Yabụ ee, enwere m olileanya na ị nwere mmasị! Mgbe m mụtara otu esi eji FFMPEG, achọpụtara m na ọ bara ezigbo uru ma dị oke mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ, yabụ ee, enwere m olileanya na ị ga-eche otu ihe ahụ! Na-elele usoro mmemme Wenezde ọzọ na 0612 TV! Ndewo ma nabata usoro ọzọ nke Wednesday! Ya mere, FFMPEG! Ngwaọrụ na-adọrọ mmasị - ka anyị bido otu esi etinye ya, mgbe ahụ anyị ga-erute isi, mgbe ahụ anyị ga-enweta ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ ị nwere ike iji sọftụwia a nweta, n'ezie, dị ka onwe gị, ọ karịrị ọtụtụ Ihe ntụgharị faịlụ mana ee dịka anyị kwuru na anyị ga-ahụ mgbe oge ruru. Nke mbu, n’ezie, olee otu anyi esi etinye ihe omume a? Ọma ị pụrụ ịchọta a download njikọ na isiokwu nkọwa na-ekwu Ọ ga-ewe gị na download peeji nke na FFMPEG ukara saịtị.
Will ga-achọpụta ozugbo na ihe dị ntakịrị mgbagwoju anya dịka ụdị nsụgharị atọ nke FFMPEG ịhọrọ site na. Ma ha na-agwa gị na ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-eme ebe a, naanị họrọ ụdị nke ahụ ka anyị wee mee nke ahụ! Ebumnuche bụ na ụdị mbipụta ga-ebu ihe niile nke FFMPEG na otu faịlụ .exe, nke kachasị adaba maka ebumnuche anyị! Ya mere, m ga-akwado Ma nke ahụ kwa.
Download kacha ọhụrụ version ọ bụla na kọmputa na ị ga-ahụ na ihe ị na-ejedebe na bụ ihe Archive. Mepee ebe nchekwa na ụdị njikwa njikwa na ị nwere ike ịlele PeaZip, nke m ga-ejikọ na nkọwapụta isiokwu. Na ebe nchekwa ahụ, tinye folda 'bin' ma chọọ FFMPEG.
Nke a bụ n'ezie naanị faịlụ ịchọrọ, yabụ wepụ ya na ebe ị nwere ike icheta na anyị nwere ike ịmalite ịtụgharị! Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ iji FFMPEG site na ebe ọ bụla na kọmputa gị, ị nwere ike ịchekwa na ebe dị mkpa, dịka ọmụmaatụ. B. na nchekwa na faịlụ mmemme, wee jikọta ya na ATzọ ya ka ọ gbanwee.
Ihe ị hụrụ ugbu a na ihuenyo bụ usoro m jiri maka nke a. M debere ihe n'ụzọ dị otu a n'ihi na ọ na - eme ka ọ dịrị m mfe Nzọụkwụ a bụ nhọrọ, n'ezie, yabụ ọ bụrụ na ịchọghị ịme nke ahụ, gbaa mbọ hụ na FFMPEG dị na folda ahụ dịka faịlụ ederede ịchọrọ ịrụ ọrụ. na Ugbu a, ka anyị banye n'akụkụ ọchị, nke na-agbanwe faịlụ na FFMPEG! Tupu nke a, amaara m na ekwuru m isiokwu ugboro ugboro, mana ka o siri pụta, FFMPEG nwere ike ịrụ ọrụ na onyonyo na ọdịyo! Ọfọn ọ bụ ịba uru akara iwu, ị gwara ya ihe faịlụ ịhazi na ụdị ụdị mmepụta ịchọrọ, ọ na-eme ya! Amazing dị ka ọ dị! Tọghata si .avi ka .mp4.
Ugbu a, ị ga-ahụ folda ebe a ebe m debere faịlụ ndị m chọrọ ịrụ ọrụ na isiokwu a. Zọ kachasị mfe iji mepee iwu ozugbo na kọmputa Windows bụ iburu ụzọ hụ na ahọpụtara ahịrịokwu, wee jide Mgbanwe, pịa nri na oghere na-adịghị na wee pịa 'Mepee windo iwu ebe a'. Nke a dị mma n'ihi na windo Iwu ahụ mepee na folda ahụ ka ị nwee ike ịmalite ozugbo.
cbs abanye rụrụ arụ
Nke a bụ nkọwa FFMPEG dị ka - ị malitere site na ịsị FFMPEG, mgbe ahụ ị kwuo -i nke pụtara 'Achọrọ m ịkọwapụta faịlụ ntinye', wee gaa n'ihu ma dee faịlụ ntinye! Ya mere, ihe anyị chọrọ ime ebe a bụ tọghata otu AVI faịlụ MP4. Yabụ naanị ihe ị ga - eme bụ iti oghere oghere na pịnye aha ọhụrụ nke faịlụ ahụ. Jide n'aka na ndọtị bụ MP4.
Kụrụ banye ma pụọ ​​ị pụọ! FFMPEG ga-agbanwe faịlụ AVI na MP4 site na ị na-ezo aka na ntinye faịlụ nke aha aha ị nyere ya. FFMPEG bụ n'ezie ihe dị nfe, na ọtụtụ oge mgbe anyị chọrọ ịtụgharị n'etiti ụdị faịlụ dị iche iche, nke ahụ bụ ihe niile ị ga - eme. Mana nke ọma, oge ga-abịa mgbe ịchọrọ ịme ihe ntakịrị ntakịrị, ma ọ bụ ebe a ka iwu switches batara.
Ihe mbụ nke nwere ike ichegbu gị bụ ogo faịlụ ahụ. Eleghị anya ị ga - achọ inwe ike tweak na ogo ya, na ihe m ga - egosi gị ebe a na - arụ ọrụ maka MP4 na AVI. Ka anyị bido na AVI.
Ugbu a enwere otu ihe na mkpakọ ihe onyonyo, quan. A na-akpọ tizer, nke na-emetụta ogo faịlụ n'ezie, ọ nwere metụtara etu esi ahụta ọnụọgụ ntakịrị ma a bịa na koodu mgbanwe sistemụ mgbanwe, mana anyị agaghị abanye na nke ahụ. Ihu ọma, ihe niile ịchọrọ ịma bụ na quantizer bụ ọnụ ọgụgụ.
Obere onu ogugu, nke ka elu. N'ezie, ogo dị elu, nnukwu faịlụ ahụ buru ibu, yabụ ị ga-emerụ ihe. Iji nweta quantizer ka ịtọ tingtọ ntọala faịlụ -AVI, ihe niile ị ga - eme dị mma, ị na - agba ọsọ FFMPEG, nye ntinye, wee pịnye -q nke ọtụtụ na - esote.
Ọnụ ọgụgụ a bụ n'ezie ntọala ọnọdụ achọrọ. Onu ogugu n’agbata 20 na 30 bu otutu, ma o buru na ichoro ihe di oke nma, inwere ike rida rue otu onu ogugu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ogo dị ala ị nwere ike ịrịgo 50.
Nnwale! Nwere ike ịhụ ọdịiche dị na ntọala dị iche iche ị họpụtara Rịba ama na nke a ga-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ị na-ede faịlụ na ndọtị .avi. Ọ bụrụ na ịme nke a maka faịlụ MP4, ị ga - enye uru - crf kama! Yabụ na -q ị pịnye -crf wee pịnye nọmba gị, echere m na nke a dị ntakịrị karịa ọkọlọtọ - q, yabụ ee, kpachara anya na nke ahụ, ụkpụrụ anaghị adị otu! Nwale ọzọ! Know mara, lee nha faịlụ ahụ, lee mma ahụ wee kpebie ma ịchọrọ ịmị elu ma ọ bụ ala.
Win7 wont update
Ọ bụrụ n ’ịchọọ njikwa mara mma, ịnwekwara ike ịkọwapụta faịlị na-ewepụta ihe. Ugbu a, bitrates na-arụ ọrụ maka ọdịyo na edemede na otu faịlụ, yabụ eleghị anya ịchọrọ ịkọ ma ịchọrọ ịgwa ma ọ bụrụ na nke a dị na ọwa isiokwu ma ọ bụ Na ịkọwapụta nke a, pịnye eriri ala, wee pịnye v ma ọ bụ dabere na iyi ahụ ị chọrọ kwụsị. Pinye nọmba.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m chọrọ ka isiokwu dị mma bụrụ 1000KB, nke dị ezigbo ala, nke ọma, ịnwere ike. Enwere m ike ịkọwa ọnụego ọdịyo na nke edemede n'otu oge ahụ, nke ahụ ga-abụkwa ọnụọgụ bit abụọ nke di abụọ ahụ. Ifriizi, n'ezie, ọ bụrụ naanị na ịchọrọ ịchịkwa akara ọzọ.
Yabụ ee, maka imirikiti iji ya, m ga-ekwu ihe ị mụtara ruo ugbu a na-ekpuchi isi gị, mana ka anyị kwuo na anyị chọrọ ịga n'ihu n'ihu - ka anyị lee FFMPEG nzacha naanị maka ọchị! Ọfọn, nke a bụ azụmahịa - FFMPEG na-abịa na ọtụtụ nzacha dị iche iche! Na ha niile nwere dị iche iche utịp ke ibuotikọ onwe ya. Ihe m mere bụ site na ndepụta ndepụta niile na nzacha ihe ntanetị, ahọpụtala m ọnụọgụ ise m chọrọ isoro gị. Abụọ n'ime ndị a bụ maka ọdịyo ma atọ fọdụrụ bụ maka edemede na ihe ndị a bụ ihe ị ga - eme nke kachasị.
Eeh, ka anyị were ya n’elu, anyị na-alaghachi n’ime ọnọdụ ngosi mmịfe n’ihi na anyị tojubigara ókè! Ka anyị mafere ngwa ngwa na nzacha ise. Ka anyị tụọ olu ahụ na mbụ. Iji mee nke a, gbakwunye ọkọlọtọ na-esonụ na oku FFMPEG.
Ọkọlọtọ ahụ n'onwe ya na-ekwu na anyị chọrọ iji nza na ọwa ụda ma oke ya na-ekwu na anyị chọrọ ịkpọku olu olu, yana ntọala nke abụọ. Ọnụ ọgụgụ anyị na-enye bụ n'ezie ịba ụba. Ya mere, ọ bụrụ na anyị kwuo olu = 2, anyị na-amụ olu okpukpu abụọ.
Nwere ike iji mpịakọta ọnụọgụ, gụnyere ụkpụrụ ndị na-erughị 1, iji belata olu. Ihe na-esote bụ nnyegharị nke ọwa. Mgbe ụfọdụ anyị na-edekọ ihe ọghọm na stereo egwu na igwe okwu, nke na-ahapụ ụda na ọwa naanị.
Anyị nwere ike idozi nke a site na ịdepụta ụda site na ọwa ntinye aka ekpe na channelụ mmepụta abụọ, nke pụtara oku iwu! Oghere aka ekpe bụ 0 na ọwa aka nri bụ 1. Ya mere, ebe a ka anyị na-ekenye ọwa ntinye aka ekpe na channelụ aka ekpe wee tinye ọwa ntinye aka ekpe na channelụ aka nri, na -emepụta egwu egwu nwere ụda n'akụkụ abụọ. Ka anyị gaa na ihe nzacha nke mbụ Nke a na-akụ, syntax ahụ dị ka nke a, rịba ama otu anyị si ekwu - nzacha: v n'ihi na ugbu a anyị chọrọ iji isiokwu anọ dozie isiokwu ahụ.
Abụọ mbụ bụ obosara na ịdị elu, spe ahụ Ezipụta obosara na ịdị elu nke mmepụta. Abụọ ndị ọzọ fọdụrụnụ bụ nhọrọ ma kọwaa n'akụkụ aka ekpe nke ọbara ọbara. Ọ bụrụ na akọwaghị ya, ọbara ọgbụgba ahụ ga-etinyere.
Can nwekwara ike iji som maka nke a. Ntuziaka a pụtara, dịka ọmụmaatụ, na anyị chọrọ iwepụ isiokwu ahụ na 2/3 nke nha mbụ ya. Ihe mgbanwe dị in_w na in_h dị, nke metụtara obosara ntinye ma ọ bụ ịdị elu.
Ihe na-esote bụ ọkwa ọkwa. Nke a dị ka ihe abụọ dị n ’ụzọ mbụ na - esi n’ọrụ ọkụkụ. Jiri w na h ịtọ obosara na ịdị elu nke mmepụta.
njehie ọnọdụ 0x000012f
Nwere ike ịme mgbakọ na mwepụ dị ka ị ga-esi na-akụ ihe. A na-ahụ ndị na-agbanwe agbanwe in_w na in_h Ebe a. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịha nha, ị nwere ike ịkọwa -1 maka otu ntinye ntinye.
Ekpebisiri uru ya site na ogologo ị kwupụtara. N'ikpeazụ adiana. Naanị kwuo ntụgharị = ma tinye akụkụ gị.
O di nwute, a ghaghi inye nkuku gi na radians. Ọ dabara nke ọma, ọ bụghị nke ahụ siri ike ebe ọ bụ na ị na-amụba site na PI / 1 80. mgbe niile. Nkwupụta na-esonụ dabere na ntụgharị ntụgharị nke ogo 45.
Ihe si na arụmọrụ a yiri ihe dị ka nke a. Ma lee, ị nwere ya! Anyị gafere site na ntuziaka onye mbido zuru oke banyere otu esi esi wụnye ma jiri FFMPEG - ọbụnadị lere ụfọdụ atụmatụ dị mgbagwoju anya n'ụdị nzacha, mana enweghị m ike ịkọcha elu ahụ! Dịka m kwuru, FFMPEG nwere ọtụtụ nzacha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ndepụta zuru ezu, m ga-agbakwunye njikọ ahụ na nkọwapụta ederede ka ị nwee ike ịmụtakwu ihe. Nke ahụ bụ naanị maka oge ahụ, ọ dị ka m gbara ọsọ na nke a ntakịrị, mana enwere olile anya na ị ga-ahụ isiokwu a na-enye nkọwa! Daalụ nke ukwuu maka ikiri na ruo oge ọzọ ị ga-ele 0612 TV na NERDfirst.net.
Kedu ka m ga esi edozi njehie Ffprobe exe?
Method 1: Gbaa ndịSistemụNgwá Ọrụ Njikwa faili (SFC.exe)
SistemụIhe nyocha faịlụ bụ ịba uru na Windows nke na-enye ndị ọrụ ohere i toomi nrụrụ aka na Windowssistemụfaịlị na weghachite faịlụ mebiri emebi. Ọ ga-i scanomi gịsistemụfaịlụ na ịrụzi ihe na-efu ma ọ bụ mebiesistemụfaịlụ na Windows.
Kedu ihe bụ Ffprobe?
okerebụ ihe dị mfe nyocha ntanetị. Nwere ike iji ya wepụta ụdị ozi dị iche iche gbasara ntinye gụnyere oge, ọnụego ya, ogo ya, wdg. Ọ bakwara uru ịnakọta ozi akọwapụtara banyere ntinye a ga-eji na edemede.
video njikwa ọkwọ
Kedu ihe kpatara nsogbu na ffprobe.exe?
Enwere ike ịkọwa nsogbu Ffprobe.exe na faịlụ rụrụ arụ ma ọ bụ na-efu, ndenye ndekọ ezighi ezi metụtara Ffprobe.exe, ma ọ bụ nje virus / malware. More kpọmkwem, ndị a ffprobe.exe njehie nwere ike mere site: rụrụ arụ Windows ndekọ igodo metụtara ffprobe.exe / ROSA Media Player.
Kedu ka m ga-esi ehichapụ usoro na ffprobe?
Wee si na mpio isi họrọ 'Usoro Manager' ihe. chere obere sekọnd, mgbe ahụ mgbe usoro ndepụta na-egosi pịgharịa gaa na ala ịchọta ffprobe.exe faịlụ na ị chọrọ ka ihichapụ ma ọ bụ kwụsị. pịa faịlụ usoro ffprobe.exe wee pịa bọtịnụ nri aka nri wee site na listi họrọ 'Tinye na ndepụta ndepụta'.
Etu esi gbanyụọ usoro ffprobe.exe na asmwsoft?
Site Asmwsoft Pc Optimizer isi window họrọ 'Startup manager' tool. Site na isi njikwa mmalite ịchọta ffprobe.exe usoro ịchọrọ ihichapụ ma ọ bụ gbanyụọ site na ịpị ya wee pịa bọtịnụ aka nri wee họrọ 'Hichapụ ihe ahọrọ' ka ihichapụ ya kpamkpam ma ọ bụ họrọ 'Gbanyụọ ihe ahọrọ'.